Nhanho dzeKushandiswa muCustomerization process muChikafu neZvokunwa Zvivakwa zvakagadziriswa | RayHaber | raillynews
mushaGENERALMatanho Ekushandiswa muCustomization process muKudya uye Kunwa Zvivakwa
Nzira dzekuchengetera kuiswa panguva yekugadziriswa mune yekudya uye zvokunwa zvivakwa zvakatemwa
Ne chirevo chakaitwa nebazi rezvetsika nekushanya musi wa20.05.2020, zvinonzi zvakagadziriswa maitiro akagadziriswa atangwa mukati merudzi rwezviyero zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCoronavirus (Covid-19). pazuva rinofanira kutemwa kushanda mune zvakasiyana zvekudya uye zvinwiwa zvivakwa, Izvo zvinodiwa kutora izvo zvinotevera matanho uye kuva nechokwadi chekuenderera kwavo.
Kuitwa kwezvinhu matanho anofanirwa uye kuongororwa kunoitwa neakakodzera manejimendi.
ZVIRONGWA ZVINYENGA UYE ZVINANGWA
Munguva yemabasa emabhizimusi ekushanya, nzira dzekudzivirira dzinozivisa nemapoka eruzhinji kana masangano dzinoteedzerwa zvizere.
Bhizinesi- rese Iyo protocol inovhara COVID-19 uye yehutsanana mitemo / maitiro Yakagadzirirwa, protocol inoongororwa nguva nenguva, inogadziriswa nekufunga zvinetso zvinosangana mukupedza, mhinduro dzakaunzwa uye matanho anoiswa mukushandira masangano neveruzhinji kana masangano.
Mukati mekuyera kweprotocol, maitiro evashandi kune mutengi anoratidza zviratidzo uye maitiro ari kufanira kutsanangurwa. Maitiro aya anotsanangurwa mugwaro reCovid-19 rakaburitswa nebazi rezvehutano.
Vafambi venzvimbo vane basa rekutora nhanho dzenharaunda munzvimbo yese.
Nezve nzvimbo dzese dzekushandisa uye dhizaini hurongwa hwemagariro evanhu yakagadzirirwa, huwandu hwevaeni venzvimbo yacho hwakatarwa zvichienderana nehurongwa hwekufamba munharaunda, huwandu hwevaeni hunogamuchirwa maererano nehunyanzvi uhwu hunogamuchirwa uye ruzivo rwekushongedzwa rwakarembera panzvimbo inooneka pasuo renzvimbo yacho.
Pamusoro pezvo, mapanera ane COVID-19 yekuchenjerera nemirairo inoshandiswa mune ino nzvimbo uye inodikanwa kuti vatevedzerwe yakarongedzwa mukati mekupinda muhoro kana kunze kwenzvimbo uye munzvimbo dzekushandiswa kunozivikanwa vashanyi nevashandi.
Kune COVID-19 zviyero kicheni kuchenesa uye chikafu chekuchengetedza protocol, tupukanana uye tupembenene control protocol Yakagadzirirwa. Vanozvidavirira vashandi vanochengetedza protocol kutevedza.
Nechitenderedzwa chakaziviswa nebazi rezvetsika uye Tourism Guest Kugamuchirwa, Kudya kweImba yekudyira uye General nzvimbo dzekushandisa, mushandi, Kuchenesa Kwakawanda uye Kuchengeta, Kicheni uye nzvimbo dzeShumiro, Bhizinesi Zvishandiso Iwo mazita anosanganisirwa muhuwandu uye denderedzwa rakabatanidzwa.
Chekutanga Nhanho mune yeCustomization process muSamsun! Tram Zvikwekwe Kuwedzera
Izban, Torbali inowanikwa mumutambo wekunyorera
Mukuru BURSARAY zvishandiso hazvina kukodzera mukutenga
Bursa-Gemlik hope dzenzira dziri munzira yekuva chaiye
Erzincan-Trabzon muTender Process
Alstom's Electric Transport Solution APTIS iri muInde ​​yekuedzwa muSpain
Ataturk Airport Moving Zvimwe Migwagwa Inofanira Kuvharwa kuMutokari
Iwo Mhepo yeIstanbul Yakajekeswa Munguva YePandemic process
Basa Revakadzi revakadzi muCOVID-19 Pandemic process
Matanho Akawedzera Kubva kuCorona Virus muEskişehir